Job vacancies | FIT Distribution Group Co.,Ltd ﻿
FIT Distribution Group Co.,Ltd
၃၁လမ်း၊ ၈၁*၈၂ကြား, ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်, မန္တလေးမြို့
FIT Distribution Group Co.,Ltd was founded in Mandalay, and also known as Myit Kyinar Shwe Taung Trading. Myit Kyinar Shwe Taung Trading was started asafamily business in 1996, and officially established as FIT distribution group Co.,Ltd on June 2017. We are specializes in distribution and logistics of Fast Moving Consumer Goods. We operate in all retails, wholesales and modern trade channels. We are based in Mandalay and have distribution networks across the upper Myanmar. Our head office is in
Mandalay, and have Myitkyina, Monywa, Yangon, Myawady.
Promotion Team Leader
335 Days, Full time , Distribution / Logistic
•	Promotion Team အား ကောင်းစွာစီမံခန့်ခွဲနိုင်သူဖြစ်ရပါမည်။
FIT Distribution Group Co.,Ltd was founded in Mandalay, and also known as Myit Kyinar Shwe Taung Trading. Myit Kyinar Shwe Taung Trading was started asafamily business in 1996, and officially established as FIT distribution group Co.,Ltd on June 2017. We are specializes in distribution and logistics of Fast Moving Consumer Goods. We operate in all retails, wholesales and modern trade channels. We are based in Mandalay and have distribution networks across the upper Myanmar. Our head office is in Mandalay, and have Myitkyina, Monywa, Yangon, Myawady.
•	အဖွဲ့အစည်းနှင့် တက်ကြွစွာပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရပါမည်။ •	ရုပ်ရည်သန့်ပြန့်သူ၊ ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်သူဖြစ်ရပါမည်။
•	အဖွဲ့အစည်းဖြင့် ပူးပေါင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရပါမည်။
Sale Team Leader
•	Sale Rep; များ၏ Daily Sale Target/ Weekly Sale Target/ Monthly Sale Target များ ပြည့်မီစေရန်၊ အရောင်း တိုးတက်စေရန် အတွက် လိုအပ်သည်များ ပံ့ပိုးပေးရန်။ •	Customerများနှင့် Sale Rep; များ၏ ဆက်ဆံရေး နှင့် အရောင်းအခြေအနေများအား အမြဲမပျက်လေ့လာ၍ လိုအပ်သည်မ� ...
•	ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီး အဖွဲ့အစည်းနှင့် လုပ်ကိုင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည် ။
•	အဖွဲ့အစည်း နှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရပါမည်။
•	အဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုစိတ်ရှိသူဖြစ်ရပါမည်။ •	လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်၍အပြောအဆိုသွက်လက်ချက်ချာသူဖြစ်ရပါမည်။ •	လုပ်ငန်းအပေါ်တွင်စိတ်ပါဝင်စား၍ကြိုးစားလိုစိတ်ရှိသူဖြစ်ရပါမည်။
•	မော်တော်ယာဉ်များ၏ ကြံခိုင်မှု့အား စစ်ဆေးခြင်း နှင့် ပြုပြင်ရန်လိုအပ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ ကားပြင်ဌာနများနျှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရန်။ •	မော်တော်ယာဉ်များ၏ သုံးစွဲမှု့ကုန်ကျစရိတ် (စက်သုံးဆီ၊ ပြုပြင်စရ� ...
•	အဖွဲ့အစည်းအား ဦးဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရပါမည်။
•	လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်၍ အပြောအဆိုသွက်လက်ချက်ချာသူဖြစ်ရပါမည်။ •	အလုပ်တွင်အချိန်ပေးနိုင်ပြီး ကြိုးစားလိုစိတ်ရှိသူဖြစ်ရပါမည်။
•	Responsible to support MD in terms of realistic and manageable diaries. •	Responsible to identify, anticipate and prepare information required for MD. •	Responsible to receive, sort and prioritize mail, and emails as appropriate and respond to all routine. •	Responsible to organize aspects of meetings develop agendas and take actions timely to finish on time at all times. •	Responsible to handle confidential agreements such as managing contracts with suppliers/customers. •	Responsible to support MD for business related travel ...
Job ads in Secretarial Jobs and in Mandalay Region
Work in Yangon (Rangoon)(7162)
Work in Yangon Region(1592)
Work in Mandalay Region(581)
Work in Mandalay City(120)
Work in Bago Region(102)
Work in Naypyitaw City(98)
Work in Mon State(87)
Dagon Glory Co., Ltd.(384)
Global Technology Co., Ltd (Global Net...(93)
Trust Venture Partners Co., Ltd(76)
Lan Thit Innovation Co., Ltd(73)
SamPar Oo & Great foundation Co., Ltd.(70)